Faahfaahin Laga Helayo Dil Ka Dhacay Degmada Garoowe. – Calamada.com
Faahfaahin Laga Helayo Dil Ka Dhacay Degmada Garoowe.
calamada April 6, 2017 1 min read
Wararka ka imaanaya degmada Garoowe ee xarunta gobalka Nugaal ayaa sheegaya in mid ka mid ah maleeshiyaatkaÂ daraawiishtaÂ ee maamulka Ashahaado la dirirka uu si bareer ah u toogtay qof shacab ah oo aan waxba galabsan sida ay sheegeen dad goob joogayaal ah.
Askariga dilka geystay ayaa si nabad gelya ah uga dhaqaaqay goobta mana jirin wax eryasho ah oo uga yimid ciidamada maamulka â€˜Puntlandâ€™iyadoona dadka shacabka ee ku dhaqan degmadaasi ay si aad ah uga caroodeen dilkaasi.
Saraakiisha maamulka gaala raaca Puntland kama hadlin dilkaasi’iyadoona askarigii dilka geystay isagoo xur ah uu ku suganyahay degmada Garoowe oo xarun u ah maamulka Puntland oo qeyb ka ah maamulada u adeega dowlada Xabashida Itoobiya.
Inta badan maleeshiyaatka maamul gobaleedyada ay dhisatay dowlada Itoobiya sida maamulada isku magacaabay Somaliland’Puntland’Galmudug’Jubbo Land’Konfur Galbeed’Hiirshabeelle iyo maamulka dowlada Ridada iyo ciidamada Kufaarta Afrikaanta ayaa si bareer ah u dilay dadka shacabka.
Previous: Weerar Ka Dhacay Magaalada Mukalla Ee Dalka Yemen.
Next: Halkan Ka Dhageyso Warka Duhurnimo 09-07-1438 Hijri.